ကောက်ရိုး / silage နှင့်စပါးကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်စိုက်ပျိုးရေး chaff cutter နှင့်တူစက်ကိုအသုံးပြုသည်,အရာအစိမ်းသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောပြောင်းဖူးကောက်ရိုးကိုဖြတ်တောက်ရန်စက်ကိရိယာဖြစ်သည်,ကောက်ရိုးဝါဂွမ်း, ပဲပုပ်အညှာ,မြက်နှင့်မြက်စသည်တို့ကိုအခြားအစာနှင့်အတူရောနှော။ တိရိစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးခြင်းမပြုမီ. တိရိစ္ဆာန်အစာခြေဘို့ chaff ရှုးနှင့် grinder စက်အကူအညီနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့အစားအစာမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငြင်းပယ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်.
လုပ်ဆောင်ချက် (၂) ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဤအဖောင်းဖြတ်စက်ကိုကြိတ်ခွဲစက်ကိုစိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောကောက်ပဲသီးနှံများကို ဖြတ်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်, ပြောင်းဖူးအညှာ ,ဆန်ကောက်ရိုး, ဂျုံကောက်ရိုး ,ပဲရိုးတံ, မြက်ပင်စိမ်း ,sorgum အညှာစသည်တို့ ,ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူ. ပြောင်းဖူးအတွက် chaff cutter grinder စက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်,ဂျုံ,ပြောင်းဖူးကြိတ်ခြင်း၊ ဒီဇယ်ချပ်စက်ညှပ်စက်သည်တိရစ္ဆာန်များအတွက်သင့်လျော်သောစိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာဖြစ်သည်,လယ်ယာမြေ,နွားမကျွေးသောလယ်သမား, မြင်း, သိုး, သမင်, ရာဘစသည်.
chaff cutter grinder စက်၏အားသာချက်
1.မြက် - ဖြတ်အရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,အရှည်က9မီလီမီတာ,12မီလီမီတာ,18 မီလီမီတာ,30 မီလီမီတာ
2.အမှုတ်ဖြတ်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်,ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်. ဖောက်သည်များ၏အဆိုအရကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားနှင့်ဘီးကိုပေါင်းစပ်ထားသည်’ ဝယ်လိုအား ,သို့မဟုတ်သင်သင်၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်မော်တာသို့မဟုတ်အင်ဂျင်ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့အတွက်မော်တာသို့မဟုတ်အင်ဂျင်ဘောင်အခြေခံကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်.
3.အစာကျွေးခြင်းဆိပ်ကမ်း၏မြင့်မားသောစွမ်းရည်,ဖွဲ၏ရှည်လျားသောအကွာအဝေး,ပြောင်းဖူး silage making.chaff ရှုးကြိတ်စက်၏မြင့်မားသောစွမ်းရည်ကိုသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်,ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ, အလင်းအလေးချိန်တည်ငြိမ်သောပြေး.
4.အဖျင်းဖြတ်စက်ကြိတ်စက်၏ဓါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, သောအထူးဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သန့်စင်ပြီးစူပါ wear-resisting.High အစွမ်းသတ္တိကိုသော့ခလောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်.
5.ဒီဇယ်လွင့်စက်၏သံတူစက်စက်ခွံကိုသံမဏိပြားများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ထားသည်, နှင့်မြေတပြင်လုံးမှိုဖွဲ့စည်းသည်, လှတယ်, နှင့်တာရှည်ခံ.
6.အမှည့်ဖြတ်စက် grinder စက်တွင်သံမဏိကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ထားသည်, သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်, အလေးချိန်ပေါ့, ရွေ့လျားရန်အဆင်ပြေပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောစက်ဒီဇိုင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်, ဓါးမတော်တဆမှုဝါးအဆုံးသတ်ချပြီး.
7.အမှုန့်ဖြတ်စက်နှင့်ကြိတ်စက်တို့တွင်ရောင်းရန်စျေးနှုန်းနိမ့်သော်လည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုစက်ရုံဖြစ်သည် .
chaff ရှုးစက် grinder စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
ခြောက်သွေ့သောမြက်ပင် 500 ~ 600
စိုစွတ်သောမြက် 800 ~ 1000
ခြောက်သွေ့သောမြက် 1000 ~ 1200
စိုစွတ်သောမြက် 1500 ~ 2000